လူမိုက် လူလိမ္မာ ခွဲခြားနည်း | မေတ္တာရိပ်
← မေတ္တာဖြင့် စီးပွားရှာခြင်း
စကားအရာ အင်္ဂါလေးတန် →
လူမိုက် လူလိမ္မာ ခွဲခြားနည်း	Posted on August 15, 2009	by mettayate လူမိုက်
မိမိအပြစ်ကို အပြစ်ဟု မမြင်ခြင်း၊
အပြစ်ကို အပြစ်ဟု မြင်သော်လည်း တရားနှင့်အညီ မကုစားခြင်း၊
သူတစ်ပါးက အပြစ်ကို ၀န်ခံပြောကြားလျှင် တရားနှင့်အညီ လက်မခံခြင်း။
မိမိအပြစ်ကို အပြစ်ဟု မြင်ခြင်း၊
အပြစ်ကို အပြစ်ဟု မြင်သော်လည်း တရားနှင့်အညီ ကုစားခြင်း၊
သူတစ်ပါးက အပြစ်ကို ၀န်ခံပြောကြားလျှင် တရားနှင့်အညီ ကုစားခြင်း။
အညွှန်း- ဗုဒ္ဓဟောကြား ကြီးပွားကြောင်းတရား။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ and tagged အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်)ရွှေပြည်သာ. Bookmark the permalink.	← မေတ္တာဖြင့် စီးပွားရှာခြင်း